Fifidianana 2018 : Efa vonona ny CENI -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana 2018 : Efa vonona ny CENI
Efa an-dalam-panomanana ny fifidianana tanteraka ny birao mahaleo tena misahana izany na ny CENI. Amin’ny maha-mahaleo tena azy izay moa dia tsy misy ary tsy hisy mihitsy ny teritery, na avy amin’ny fanjakana izany na avy amin’ireo sehatra iraisam-pirenena, na koa ireo vondrona politika misy. Notontosaina omaly teny Alarobia ny fivoriana ny amin’ny rafitra fakan-kevitra, niarahana tamin’ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena sy ny haino aman-jery. Nandritra izany fivoriana izany no niresahana mikasika ireo asa mbola tsy maintsy miandry ny CENI, mandra-pahatongan’ny fifidianana amin’ny 2018. Ao ny fanamafisana ny fanomezana kara-panondro ho an’ireo izay efa ampy taona, nefa mbola tsy manana izany. Ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana moa no miandraikitra izany mivantana. Ny anjaran’ity birao ity kosa dia ny mampiditra ilay vaovao avy amin’ilay fanaovana kara-panondro, makany amin’ny tahirin-kevitra.
Ampahafantarina ny besinimaro ihany koa fa efa mipetraka amin’izao fotoana izao ny Birao mpanolotsaina na “Commission consultative” amin’izany asa fiantsorohana izany. Io birao io no hijery ny soso-kevitra ataon’ny besinimaro ny amin’ny fanatsarana ny rafitra ara-dalàna ny amin’ny fifidianana. Efa voatendry ary efa am-perinasa ireo solontena telo avy amin’ny fiarahamonim-pirenena, sy ireo telo ihany koa avy amin’ny antoko politika izay miasa ao anatiny. Ka miasa in-telo isan-kerinandro izy ireo, dia ny Alatsinainy sy ny Alarobia ary ny Zoma. Ny « Programme des Nations Unies pour le Développement » (PNUD) moa no mamatsy vola izany birao mpanolotsaina izany.
Mbola hamafisina ihany koa ny firosoana mankany amin’ny fametrahana ireo vaomiera maro samihafa misahana ny fanabeazana eo amin’ny lafiny fifidianana. Ka iandraiketan’izany vaomiera izany ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo mpikatroka ara-pifidianana sy ny fanamafisana ny fanabeazana ara-pifidianana mba hizotra an-tsakany sy an-davany izany. Tsy latsa-danja amin’izany ihany koa ny fampahafantarana ny olona ny zo sy ny adidiny mikasika ny fifidianana, satria tsy anjara andraikitry ny birao irery izany, fa misy mpisehatra maro samihafa ao anatiny.
Rehefa manatanteraka asa iray moa dia tsy maintsy misy foana ny lesoka. Eny am-pahitana izany lesoka izany no ahafahana manatsara ny amin’ny ho avy. Raha toa ka 8 673 485 mantsy no isan’ireo mpifidy voasoratra anarana tamin’ny famaranana ny lisi-pifidianana tamin’ny taona 2016, nahatratra 9 222 918 ny isan’ireo olom-pirenena voasoratra ao anaty lisi-pifidianana hatramin’ny 15 Avrily lasa teo. Ka manome taha-piakarana 6,33% izany, izay midika fa nahitana fitomboana avo telo heny nihoatra ny tamin’ny farany. Efa nifarana tamin’ny fomba ofisialy ny 15 Avrily lasa teo moa ny lisi-pifidianana amin’ity taona ity, ary amin’ny volana Desambra indray vao misokatra.